आईजीपी खनालविरुद्ध किन हुँदैछ मोर्चाबन्दी ? – Online National Network
आईजीपी खनालविरुद्ध किन हुँदैछ मोर्चाबन्दी ?
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार ०३:२३
काठमाडौं, १४ भदौ – कञ्चनपुरमा बलात्कृत भई मृत्यु भएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा प्रहरीले सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरेको छ । तर, अहिले पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरि अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल असफल भए भन्दै एउटा समूहले नियोजित रुपमा प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले सामान्य तरिकाले अनुसन्धान गर्दैन र बालिका पन्तको मुद्दामा पनि प्रहरीले निश्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । तर, कञ्चनपुरको घटनालाई भक्तपुरको इन्काउन्टर र एआईजी बढुवासँग जोडेर नियोजित रुपमा आईजीपी खनाल विरुद्ध समाचार प्रवाह भईरहेको हुँदा संगठनमा खराव तत्वले प्रभाव जमाउने संभावना बढेको छ ।
प्रहरीमा विगत देखि नै सिन्डिकेट खडा गर्दै आएका पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको समूह अहिले कञ्चनपुरको घटनालाई लिएर संगठनविरुद्ध अतिरञ्जना फैलाउन मिडिया क्याम्पनेमा लागेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
आफू आईजीपी छँदा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक बढुवा गर्नु भनेर आदेश दिंदा अर्यालले अदालतको आदेशलाई नै रद्दिको टोकरीमा पु-याएका थिए । जसका कारण यादव अधिकारी जस्ता होनहार प्रहरी अधिकृतले अवकाशको मुखमा नौ महिना पछि बढुवा हुनुप-यो ।
अहिले खनाल आईजीपी भएको पाँच महिना वितेको छ । अर्यालले नै गर्न नसकेका सईहरुको बढुवा गरेर आईजीपी खनालले आफूलाई सक्षम नेतृत्वको उदाहरण दिइसकेका छन् । आईजीपी खनालले सिपाहि देखि डिआईजीसम्मको पनि विवादरहित तरिकाले बढुवा सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
खनाल आईजीपी भएपछि कति एआइजी राख्ने भन्ने नै टुंगो लागेको थिएन । सरकारले एआइजी संख्या निक्र्यौैल गरेपछि अर्को समस्या थपियो कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को ।
कासमूको समय नै बल्ल शुरु भएका कारण एआईजी बढुवा लम्बिन पुगेको हो । तर, अर्यालले गरेजस्तो सर्वोच्चको आदेश नमान्ने काम खनालले गरेका छैनन् । उनी जतिसक्दो छिटो एआईजीमा बढुवा गर्न चाहन्छन् ।
धैर्य गर्न नसक्ने, काम भन्दा बढि हल्ला गर्ने, मिडियाबाजी गर्ने डिआईजी पुष्कर कार्कीलाई उचालेर अर्यालले खनाल विरुद्ध षड्यन्त्र गरेका हुन् कि भन्ने आशंका प्रहरी संगठनभित्र बढेको छ । आफूले सिन्डिकेट लाद्न नसकेपछि संगठनविरुद्ध लाग्ने अर्याल आफैमा विवादास्पद पात्र पनि हुन् ।
उनी संगठन प्रमुख छँदा छोरा आयुषले केटी काण्डमा पोखरामा अनिमेष ठाकुरको हत्या गरेका थिए । जुन घटनालाई अर्यालले प्रमाण नै नष्ट गरी छोरालाई जोगाएका थिए । शक्तिको आडमा संगठनमा जे पनि गरेका अर्यालले अहिले छानविन भइरहेका घटनलाई जोडेर आईजीपी विरुद्ध षड्यन्त्र त गरेका होइनन् भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्यालका मित उपेन्द्र महतोको माफिया समूह पनि प्रहरीमा आफू अनुकुलको काम गर्न नसकेपछि संगठन विरुद्ध लागेको छ । काठमाडौंमा एसपी छँदा असफल भएका हालका डिआईजी कार्कीमाथि बढुवाको समय नै नकुरी मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप छ ।
अर्कोतर्फ भक्तपुर इन्काउन्टरमा प्रहरीले गरेको कारबाही प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएर उल्टै संगठन विरुद्ध लागेका एसएसपी विश्वराज पोखरेल पनि सरुवा भएको स्थान दिल्ली नजान कार्की र अर्याल समूहसँग कुम जोडेर संगठन प्रमुखविरुद्ध विष बमन गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा असफल भएका एसएसपी पोखरेल चाकडीमा रमाउने प्रहरी अधिकारी हुन् ।
त्यसो त आईजीपी खनालले गलत गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही गरेका उदाहरण पनि छन् । मकवानपुरका एसपीलाई उनले एक महिनामै तानेका थिए भने दर्जनौंलाई विभागिय कारबाही गरेका छन् । तर, आईजीपी असफल भयो भन्दै समाचार छपाउने प्रहरी अधिकारीमाथि समयमै अनुसन्धान गरी कारबाही नगर्ने हो भने प्रहरीमा यस्ता समस्याले लामो समयसम्म जरा गाड्ने निश्चित छ र, संगठनमा माफियाहरुकै हाली मुहाली हुनेछ ।
एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ पार्टी बनेको अवस्थामा आइजीपीलाई माओवादी निकट भन्दै कु–प्रचारमा उत्रिएका अर्याल, कार्की र पोखरेलको समूहलाई माफियाहरुको संरक्षण रहँदै आएको छ । दीपक भट्ट जस्ता माफिया ठेकेदारले आईजीपी बनाउन लविङ गरेका कार्कीले पूर्व आईजीपी अर्यालले उचालेकै भरमा समयमा बढुवा पाउने होइनन् ।
आफू संगठनमा रहँदा सर्वोच्च अदालतले बढुवा गर् भनेर गरेको आदेशको पालना नगर्ने र हत्यारा छोरालाई जोगाउने अर्यालले कसैको बढुवाको लविङ गर्नु कुन नैतिकता भित्र पर्छ ? अहिले संगठनभित्रबाट उठ्ने गरेको प्रश्न हो यो । – यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक